Aqalka Sare oo Sababeeyey Sababta uu u Baajiyey Kalfadhigiisii Afaraad – Kalfadhi
Aqalka Sare oo Sababeeyey Sababta uu u Baajiyey Kalfadhigiisii Afaraad
War-saxaafadeed uu soo saaray Aqalka Sare ee Baarlamaana Ferderaalka Soomaaliya ayaa lagu caddeeyey in sababta dib u dhaca kalfadhiga afaraad ee golaha ay ku qotonto walaac amni iyo arrimo farsamo.
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare oo nuqul ka mid ah war-saxaafadeedkaas soo gaarsiiyey Kalfadhi ma bixin faahfaahinta waxa ay tahay walaaca amni iyo arrimaha farsamo ee ka baajiyay iney xaadiraan furitaanka kalfadhiga afaraad.
Sidoo kale, gudigu ma sheegin waqtiga rasmiga ah ee uu kalfadhiga afaraad ee goluhu furmi doono.
Goluhu wuxuu sidoo kale sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladaha siyaasadda, amniga iyo Federaalka Soomaaliya. Isagoo isticmaalaya matalaaddiisa dastuuriga ah ayuu sheegay inuu Goluhu qaadi doono tillaabooyin uu xal ugu baadi goobayo dhibaatooyinkaas.
Halkan ka akhriso war murtiyeed-ka.